inqubo yokungeniswa kwe-induction-Kungani usebenzisa i-induction annealing
Inqubo Yokufaka Induction
Isingeniso se-HLQ sihola phambili nezinsizakalo zokushisa kokungeniswa Ukufakwa kwe-induction kwenza ukulawula okuqondile nokwethembekile kwezinto zensimbi. Ukwehliswa kwe-induction kusetshenziselwa ukuthambisa ukuthambisa okuthambile nokucindezelwa, kunikeze izinzuzo ezinkulu kunezindlela ezijwayelekile. Ukufakwa kwe-induction kwenza ukususwa okushisayo kokungcola ngesikhathi sokuncipha okukhanyayo. Ukufakwa kwe-induction kusetshenziswa kakhulu ekunciphiseni okuthambile nasekunciphiseni ukukhululeka kwengcindezi futhi kunikeza izinzuzo ezinkulu kunezindlela ezijwayelekile.Ukufakwa kwe-induction kwenza ukususwa okushisayo kokungcola kokuqukethwe ngesikhathi sokufakwa okukhanyayo.
I-Annealing ye-Induction ukwelashwa kokushisa kwensimbi lapho impahla yensimbi ivezwa ekushiseni okuphezulu isikhathi eside bese ipholile kancane. I-Annealing ibonakala kakhulu ngoshintsho olwakhiwe oluncane olunesibopho sokushintsha izakhiwo zemishini. Inhloso enkulu yale nqubo ukunciphisa ukuqina kwensimbi nokwenza ngcono ukuthambeka kwayo.
Izinsizakalo zokuphawula zibhekisa ngqo kwinqubo yokuletha okuqukethwe endaweni yayo elula kakhulu. Inqubo yethu yokulungisa ithambisa insimbi kodwa ingafinyeleleki ngokugcwele. Izinga lomsindo lincike ezintweni ezibonakalayo, amazinga okushisa aphezulu afinyelelwe kanye nobude besikhathi esipholile. Inqubo noma ukukhululeka kokunakekelwa kwensimbi kusetshenziselwa ukunganaki imiphumela yomsebenzi obandayo; okungukuthi, ukuthambisa nokukhuphula ukuzwakala kwensimbi eyayiqiniswe kanzima ngaphambili. Izingcindezi zangaphakathi zingaqhamuka ngenxa yezinqubo zokuhlunga epulasitiki ezifana nokufaka imishini noma ukugaya, ukupholisa okungalingani nomfaniswano lapho kuhlangana insimbi noma inqubo yokusakaza noma ukuguqulwa kwesigaba. Ukuhlanekezela nokuwohloka kungenzeka uma izingcindezi zangaphakathi zingasuswa. I-Annealing izosusa lezi zingcindezi lapho le ngxenye ifudunyezwa emazingeni okushisa anconyelwayo, ibanjelwe khona isikhathi eside ngokwanele, futhi kancane kancane inciphe ekushiseni kwegumbi.
Kungani usebenzise i-annealing?
Ukushisa kwe-induction kwanamuhla kunika izinzuzo eziningi kunezinye izindlela zokushisa futhi kuvame ukusetshenziselwa ukufaka izicelo. Ukushisa ngokungeniswa kunikeza ukushisa okuthembekile, okuphindaphindwayo, okungathintani nokwonga amandla ngesikhathi esincane. Izinhlelo zombuso eziqinile ziyakwazi ukufudumeza izindawo ezincane kakhulu ngaphakathi kokubekezelelana okunembile kokukhiqizwa, ngaphandle kokuphazamisa izici zomuntu ngamunye zensimbi. Ukungeniswa kungasetshenziselwa indawo noma ngokushisa; ukutholwa kwamacala kungenzeka kuye ngesikhathi, izinga lokushisa nezimpawu zento.
I-induction annealing yigama elejwayelekile elibhekisa ekufudumaleni insimbi ekushiseni okucacisiwe bese ipholisa ngesilinganiso elizokhiqiza i-micostosition ekhanyisiwe. Usebenzisa Induction, insimbi ingashiswa ngokushesha ekushiseni emjikelezweni olawulwa kaninginingi ngaphandle kokuthinta ilitshe lensimbi noma ukufudumeza umkhathi ozungezile. Izithako zokupholisa zezinsimbi ezikhohlisayo zivame ukuba semoyeni ovulekile ophumela ekwakhiweni kwe-pearlite. Izinsimbi ezingezona ezidonsayo, ithusi elinjalo noma ithusi, zingaphansi kokuphola okusheshayo ngokucima emanzini. Imiphumela "thambisa" impahla bese yenza kube lula ukwakheka kwisimo esidingekayo.
I-Annealing ye-Induction isetshenziswa kakhulu lapho kusetshenzwa nge-wire, kwakhiwa ithuluzi ngokunemba, nezicelo zokwenza i-tube. Izinto ezisetshenziswayo zokufaka i-induction annealing zifaka i-aluminium, i-carbon Steel, ne-carbide. Ezinye izinzuzo ze-Induction annealing yilezi: amandla ngokufunwa; imijikelezo yokushisa esheshayo; ukukhishwa kwamandla okuqhubekayo endaweni enkulu yokufudumeza (ie. kuhhavini); ukonga izindleko ngenxa yokuncishiswa kwamandla okusetshenziswa; Ukushisa okuqondile kwensimbi hhayi umoya ovele njengakwinqubo yokudlulisela; inqubo ephephile kunezindlela zomlilo ezivulekile; isilawuli sezinqubo esithuthukisiwe sokufudumeza ngisho nokushisa okufana kumazinga okushisa anikezwe angaxhomekile kwikhono le-opharetha.
Kungani ukhethe ukuhanjiswa kwe-HLQ for anuction?
Singabaholi bezimboni ekushiseni kokufudumeza namahhovisi eChina.
Ukwamukela ukukhipha luhlobo lokuphathwa kokushisa yi-induction heater, ukushisa insimbi ekushiseni okucacisiwe bese ipholisa ngesilinganiso elizokhiqiza i-micostosition ekhanyisiwe. Usebenzisa ukufudumeza induction, insimbi ingashiswa ngokushesha ekushiseni emazingeni aphindaphindwe ngaphandle kokuxhumana nelitshe lensimbi, izinto ezibonakalayo zivame ukufakwa emoyeni ovulekile. Imiphumela "thambisa" impahla bese yenza kube lula ukwakheka kwisimo esidingekayo.
Inzuzo yokwengeza ngokufudumeza kwangaphakathi:
1. Amanani aphezulu wokukhiqiza
2. Indawo yokufudumeza engaphansi kanye nesidingo samandla esingapheli (iehhavini)
3. Gcina izindleko ngenxa yokwanda kokukhiqiza kanye nezindleko zabasebenzi ezincishisiwe
4. Easy ukulawula Ukushisa isikhathi kanye lokushisa
Ngoba sisebenza ngokufudumeza kokufakwayo, amakhasimende ethu azuza kwizisombululo ezihlanganisiwe zokungenisa imali ezimbonini eziningi.
Amakhasimende ethu agwema ukusungulwa ngokweqile futhi ahlanganyele ngokusebenzisa ukusetshenziswa kwe-induction, okubangela imfucuza ephansi kanye nemiphumela ethuthukisiwe ngentengo ephansi. Sinezobuchwepheshe be-top notch, imishini, kanye nezinqubo zokukhiqiza ezihlangabezana namazinga aphezulu kakhulu.